Wakiilka Marco Asensio Oo Xaqiijiyay Dalabka Arsenal
HomeWararka CiyaarahaWakiilka Marco Asensio oo xaqiijiyay dalabka Arsenal
April 7, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Wakiilka weeraryahanka Real Madrid Marco Asensio ayaa xaqiijiyay in Arsenal ay la xiriirtay suurtagalnimada suuqa kala iibsiga xagaagan.
26-sano jirkaan ayaa galay 18-kii bilood ee ugu dambeeyay qandaraaskiisa Los Blancos, waxaana si aad ah loola xiriirinayaa inuu ka tagayo xilli ciyaareedka 2022-23.
Arsenal ayaa la rumeysan yahay inay xiiso u leedahay keenista Asensio Emirates, waxaana loo maleynayaa inay qaadan doonto dalab 25 milyan ginni ah oo ay ku dooneyso Real si ay uga tagto ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain.
Wakiilka Asensio ayaa haatan xaqiijiyay in Gunners ay loolan adag ugu jirto saxiixa weeraryahanka, laakiin waxa ay tartan adag kala kulmi doonaan kooxda kula tartamaysa horyaalka Serie A ee AC Milan .
“Waan ku faraxsanahay xiisaha Milan waa ikhtiyaar xitaa haddii ay jiraan dalabyo ka imaanaya kooxo Ingiriis ah oo ay ku jirto Arsenal, waxaan diyaar u nahay inaan qiimeyno dookh kasta,” wakiilka Asensio ayaa laga soo xigtay sida ay qortay The Mirror .
Asensio ayaa dhaliyay 10 gool waxaana uu caawiye ka ahaa hal gool 34 kulan oo uu u saftay kooxda Carlo Ancelotti xilli ciyaareedkan, laakiin waxa laga saaray Federico Valverde ciyaartii arbacada ee wareega 8da Champions League ay kaga badiyeen Chelsea.